चितवनमा भोलि देखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु ! – Saurahaonline.com
चितवनमा भोलि देखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु !
सौराहा अनलाइन | २०७७, १३ माघ मंगलवार
चितवन । चितवनमा भोलि बुधवारदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिने भएको छ । आज मंगलबार खोप प्राप्त भएसँगै भोलिदेखि नै लगाउन शुरु गरिने भएको हो ।
खोप लगाउनका लागि जिल्लाभर तीन वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ । भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल, पूर्वी चितवनको रत्ननगरस्थित रत्ननगर बकुलहर अस्पताल र माडीको बगौडा अस्पतालबाट खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
तीन वटै अस्पतालमा बिहान साँढे १० बजे एकै समयमा खोप लगाउन शुरु गरिने कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सबै अस्पतालमा खोप पुगिसकेको छ ।
तीन वटै अस्पतालमा खोप लगाइसकेपछि हुन सक्ने सम्भावित अनपेक्षित घटना व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको छ । भरतपुर अस्पतालका डा. युवानिधि बसौलाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । यस्तै रत्ननगर अस्पतालमा डा. रामचन्द्र श्रेष्ठ तथा माडीमा डा. रन्जु सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । तीन वटै खोप लगाउनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ ।
जिल्लामा आज ४ हजार एक सय डोज खोप प्राप्त भएको छ । पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने फ्रन्टलाइनरहरुलाई लगाइने छ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तिवारीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष उपचार सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका, एम्बुलेन्स तथा शव बाहनका चालक र सरसफाईकर्मीहरुलाई खोप लगाइने छ ।
जिल्लामा पहिलो चरणका लागि ६ हजार २ सय खोप माग गरिएको थियो । तर ४ हजार एक सय डोज मात्र आएको छ । भरतपुरमा मात्रै पहिलो चरणमा ४ हजार जनालाई खोप लगाउन पर्ने छ । यस्तै रत्ननगरमा करिब २ हजार ५० र माडीमा एक सय ५० खोप आवश्यक छ । अहिले उपलब्ध खोज लगाउन शुरु गरिने र थप माग गरिने तिवारीको भनाई छ ।
भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको थियो । उक्त खोप अहिले प्रदेशहरुमा पठाउने काम भइरहेको छ । १८ गतेभित्र ७७ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी केन्द्रमा खोप पुग्नेछ र अभियान सुरु भएको १० दिनभित्र पहिलो चरणको खोप अभियान पूरा हुनेछ । पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजारलाई खोप दिइनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।